Dowladda Federaalka Soomaaliya oo taageertay go’aanka uu Sucuudigu ka qaatay khilaafka kala dhaxeeya Canada - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDowladda Federaalka Soomaaliya oo taageertay go’aanka uu Sucuudigu ka qaatay khilaafka kala dhaxeeya Canada
August 8, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhinac istaagtay go’aanka uu Sucuudi Caraabiya ka qaatay khilaafka soo kala dhexgalay dalka Canada.
Bayaanka kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibada Soomaaliya ayaa lagu yiri: “Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay si dhow ula socotay xaaladihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay xiriirka Dowladda aanu walaalaha nahay ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya iyo Canada.”
“Iyadoo laga ambaqaadaayo arrinkani, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay adkeyneysaa taageeridda mowqifka diidmada ee Dowladda aanu walaalaha nahay ee Boqortooyada Sucuudi Carabiya ee faragelin dibadeed oo lagu sameeyo arrimaheeda gudaha, iyadoo la tixgelinayo mabda’a aan oggolaanayn faragelin ee lagu caddeeyay Axdiga Qaramada Midoobay, oo ay ku jirto gobonnimadeeda iyo madax bannaanida go’aan gaariddeeda iyo waxa ay jideyso oo ah siyaasado ama habab garsooreed oo xiriir la leh shuruucdeeda qaran.” Ayaa lagu sii sheegay bayaanka.
Maalmihi u dambeeyay wadamada Sucuudi Caraabiya iyo Canada ayaa khilaaf soo kala dhexgalay.
Khilaafka ayaa ka dhashay kadib markii Canada ay Sucuudiga ugu baaqday in uu xabsiga ka sii daayo dumar u dhaqdhaqaaqa xuquuqul iinsaanka taasoo ay Riyadh ka carootay.
Sucuudiga ayaa joojiyay dhammaan ganacsigii, waxaana uu dalkiisa ka saaray safiirada Canada waxaana uu u jeediyay muwaadiniinta Sucuudiga ee wax ka barta gudaha Canada in ay ka tagaan.
Canada ayaa ka jawaabtay waxayna sheegtay in ay sii wadi doonto u qareemida xuquuqul iinsaanka.
June 30, 2018 84 qof oo Soomaai ah oo laga soo masaafuriyay Mareykanka oo yimid Muqdisho
January 15, 2018 Fanaanadii Soomaaliyeed Khadiijo Cabdullaahi Daleys oo ku geeriyootay Canada
January 15, 2018 Haayada Xuquuqul Insaanka oo sheegtay in Al-Shabaab ay xoog askar ahaan ugu qoranayaan caruurta